Munaasabad ku saabsanayd is-dhexgalka Soomaaliya iyo Turkiga oo lagu qabtay Ankara | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Munaasabad ku saabsanayd is-dhexgalka Soomaaliya iyo Turkiga oo lagu qabtay Ankara
Munaasabad ku saabsanayd is-dhexgalka Soomaaliya iyo Turkiga oo lagu qabtay Ankara
Ankara-(SNTV)-Munaasabad ku saabsanayd is-dhexgalka Bulshooyinka walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa Xalay lagu qabtay Magaalada Ankara ee caasimadda Dalkaasi.
Waxaa munaasabadda ka qeyb galay, Mas’uuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Turkiga, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaannada Labada Dal, Ganacsato, Dhaqaatiir, Cuqaal iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada oo ay dhammaantood ka muuqato bogaadin iyo in ay ku faraxsan yihiin is dhexgalkooda.
Safiirka Soomaaliya u jooda Turkiga, Danjire; Jaamac C/llaahi Caydiid, ayaa sheegay in Dowladda ugu dhow Soomaaliya ay tahay Turkiga xiriir ballaaranna uu ka dhexeeyo Labada dhinac, wuxuuna aad ammaanay waxyaabaha wanaagsan ee ay Soomaalida ku soo kordhisay Turkiga oo ay ka mid yahay ganacsiga furfuran.
Xildhibaan, Axmed Macallin Fiqi, oo ka mid ah mudanayaasha Aqalka hoose ee Baarlamanka Soomaaliya, ayaa sheegay in Dowladda Turkiga ay Garab istaagtay Soomaaliya, isagoo ku dheeraaday sida wanaagsan ee ay muwaaddiniinteenna u soo dhoweysay xukuumadda Ankara, wuxuuna Labada Shacab kula dardaarmay in ay adkeeyaan xiriirka qotoda dheer ee ka dhexeeya.
Farxaan Maxamed Dhoorre, oo ah maamulaha Shirkadda Guuleed (Real State), ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay munaasabad noocan oo kale ah ku qabsadaan Dalka Turkiga, kuna guuleystaan qaban qaabadii ay u galeen qabsoomidda kulankan ee lagu xoojinayo xiriirka Labada Shacab, isagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan qabashada munaasabado kale oo tan la mid ah.
Munaasabaddan ayaa kusoo beemeysa xilli uu aad u sii xoogeysanayo xiriirkii soo jireenka ah ee Labada Shacab, iyadoo ay waayadii dambana aad usoo badanayeen Dadka Soomaaliyeed ee degaya ama siyaabaha kala duwan u tagaya Dalka Turkiga, taas oo sii adkaynaysa cilaaqaadka qotoda dheer ee Muqdisho iyo Ankara.
Previous articleDuqa Muqdisho oo Dhagax-dhigay Waddo Laami ah
Next articleWasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo wada tashi la yeelatay ganacsatada